Ukupakisha kweMveliso kuthunyelwa kwiibhokisi, iibhokisi, iibhegi, i-blisters, ukufaka, izitikha kunye neelebheli njl.
Ukupakisha kweMveliso kunokubonelela ngokhuseleko olufanelekileyo ukunqanda iimveliso ukuba zonakaliswe ngexesha lokuhamba, ukugcinwa kunye nenkqubo yokuthengisa.
Ngaphandle komsebenzi wokhuselo, ukupakishwa kwemveliso kukwadlala indima ebalulekileyo ekuhombiseni imveliso, ukukhuthaza uphawu, ukuhlangana neemfuno zabathengi kunye neemfuno zengqondo ekugqibeleni zikhawulezisa inkqubela phambili yentengiso.
Ukupakishwa kwemveliso ngamava abonakalayo emveliso; Isithethi seempawu zemveliso; Ukunikezelwa komfanekiso wobumbano kunye nokuma.
Ukupakishwa kwemveliso eyilwe kakuhle yindlela ebalulekileyo yokwenza inzuzo kwishishini. Ukuma ngokuchanekileyo ngobuchule kunye nokuhambelana koyilo lokupakisha kwengqondo lwabathengi kunokunceda ishishini ukuba ligqame kwiqela labakhuphisana nabo kwaye baphumelele igama.
Imithetho kaDuPont ibonisa ukuba ama-63% abathengi bathathe izigqibo zokuthenga ngokuhambelana nokupakishwa kwemveliso. Ngenxa yoku, uqoqosho lweemarike kule mihla lukwabizwa ngokuba luqoqosho loqwalaselo. Luphawu lokutsala amehlo kunye nokupakisha kuphela okunokwamkelwa nokwamkelwa ngumthengi kwaye kuguqulwe kube yintengiso.
Ke ngoko, onke amashishini kufuneka anike ingqalelo ephezulu kwimisebenzi yokupakisha kwi-branding.
Yonke imveliso ineepakethe zayo ezizodwa, kwaye iimveliso eziphambili azisindisi mali ekuyileni iipakethe ezifanelekileyo zorhwebo lwayo.
Ngokucacileyo, ukupakishwa kubaluleke kakhulu kwiimveliso:
Ukupakisha Ngaba luhlobo lweMandla okuThengisa.
Namhlanje, iMakethi izaliswe ziimveliso ezahlukeneyo, ingqalelo yemveliso nganye imfutshane kakhulu, kwaye ukupakisha kufuneka kubambe kwaye kubambe umthengi xa bebeka umbono kwiishelufa. Kuphela kukupakishwa okusebenzise ngokugqibeleleyo uyilo, umbala, imilo, izinto ezimele ulwazi lweMveliso, iBrand kunye neNkcubeko kunye neNkcubeko, ezinokutsala umthengi kwaye zinike umthengi umbono olungileyo wemveliso kunye nophawu, emva koko kukhokelele kwintsebenzo yokuthenga. .
Ukupakisha ngamandla okuthengisa athatha uxanduva oluphambili lokutsala abathengi.
Ukupakisha Ngaba luhlobo lweMandla okuchonga.
Xa ukupakisha kutsalela ngempumelelo umthengi kwaye kubamba ingqalelo yabo, ukupakisha kuya kufuneka kube nomsebenzi wokudlulisa imveliso kunye neempawu.
Ukupakishwa kwemveliso akufuneki kuphela kwinkangeleko eyenzelwe kakuhle kodwa ikwanokuthetha ngemveliso.
Ukusebenza kwemakethi yemveliso kuxhomekeke ekubeni kulunge kangakanani ukupakishwa kuzisa amanqaku emveliso kunye nolwazi oluneenkcukacha.
Ukupakisha luhlobo lwamandla okuPhawula.
Ukupakisha kunentengiso kunye neBranding function. Oko kukuthi, ukupakishwa kungabonisa ulwazi lwentengiso; Yakha uphawu lokuchonga kwaye uvumele umthengi aqonde igama leBrand, ipropathi yeBrand, ngaloo ndlela wenze umfanekiso wegama.
Kuyilo lophawu, ukupakishwa nako kunokunyangwa njengomthombo weBrith Image.
Ukupakisha njengomboniso wangaphandle wemveliso, kuthwala uxanduva lokuziva ukuba ishishini lifuna ukunika umthengi.
Ukupakisha yindima ephambili kukwahluka kwemveliso. Inokudala uphawu lophawu kwaye ngako oku abathengi bayatsala kwaye ukuthengiswa kuyenziwa.
Ukupakisha Ngaba luhlobo lwamandla enkcubeko.
Intliziyo yokupakisha ayiphelelanga kwinkangeleko yangaphandle kunye nenqaku, kodwa iyakha nangokudibanisa umlinganiswa ngamnye kunye nomlinganiswa othandekayo.
Ukupakisha kunokubonisa imveliso kunye nenkcubeko yeshishini ngokufanelekileyo
Ukupakisha luhlobo lwamandla okuhlangana.
Ukupakishwa kweMveliso kulungiselelwe abaThengi, kunokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi, ngeli xesha kuzisa amandla okusondela kubathengi.
Lilonke, ukupakisha kunikwe imisebenzi engakumbi nangakumbi.
Ukupakisha kudlala indima ebaluleke ngakumbi kwintengiso kunye negama.